ဝဘ်ဆိုက်ထဲက တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာမျက်နှာတွေကို pdf အသွင်ပြောင်းပြီး သိမ်းထားရအောင်
ကဲ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် ၀ဘ်ဆိုက်က စာနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို pdf လုပ်ပုံလုပ်နည်းပြောပြပါ့မယ် . လွယ်လဲလွယ်ကူသလို အသုံးပြုသူတွေအတွက်လဲ အတော်လေးထိရောက်ပါတယ် .. ဘာ့ကြောင့် ဒီ software လေးကိုပေးရလဲလို့မေးရင် .. အင်တာနက်ကို အချိန်တွေအကြာကြီး မသုံးနိုင်ကြတဲ့ ညီအစ်ကိုများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် . တစ်ချို့တွေဆိုရင် ဆိုက်ထဲက ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သိမ်းထားချင်ကြတယ် .. နောက်တစ်ခုက လိုအပ်တာတွေကို Pdf ပြောင်းလိုက် ပြီးတော့မှ အိမ်မှာ ဇိမ်နဲ့ကြည့်ချင်သူများ အတွက်လဲပါပါတယ် . အခုဒီ software လေးက ကိုလိုချင်တဲ့ စာမျက်နှာတွေကို5စက္ကန့်အတွင်းမှာ Pdf ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ် . တန်ဖိုးရှိတဲ့ နည်းပညာတွေကို pdf လုပ်ပြီးသိမ်းထားချင်သူများအတွက်ပါ.. အခုပေးတဲ့ software လေးနဲ့ ကျွန်တော့် ၀ဘ်ဆိုက်က စာနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို အရင် pdf လုပ်ပြပါ့မယ် .. ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်ကို ဖြုတ်ထားတဲ့အတွက် pdf လုပ်တဲ့နေရာမှာ အတော်လေးထိရောက်ပါတယ် .. စာမျက်နှာတွေကို pdf ပြောင်းတဲ့အခါ read more လုပ်ထားတဲ့ဆိုက်တွေဆိုရင်တော့ hidden လုပ်ထားတဲ့ စာတွေကို သူက မလုပ်ပေးပါဘူး . အဲ့ဒီ့အချိန်ကျရင်တော့ အဆင်ပြေသလို ကြည့်လုပ်ကြပေါ့ . အခုတော့ ကျွန်တော့်ဆိုက်ရဲ့ ဒီစာမျက်နှာ ကို လုပ်ပြပါ့မယ် ..
၁။ ပထမဦးဆုံး ကိုလုပ်ချင်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်ကိုဖွင့်ပါ .
၂။ မိမိလိုချင်သည့် စာမျက်နှာကို ဖွင့်ထားပါ ..
၃။ print (ctrl + p) ကို နှိပ်ပါ ..
၄။ pdf creator ကိုရွေးပါ ..
၅။ All ကို ရွေးပေးပြီး Print ကိုနှိပ်ပါ ..
၆။ ဖိုင်ကို ဘယ်နေရာမှာ သိမ်းမှာလဲလို့ မေးလာတဲ့အခါ ကိုအဆင်ပြေရာနေရာ တစ်နေရာကိုရွေးပါ . ကျွန်တော်ကတော့ desktop ကိုရွေးပြပေးထားပါတယ် . ပြီးတာနှင့် save ကိုနှိပ်ပါ .. ကဲအခုလောက်ဆိုရင် ကိုလိုချင်တဲ့စာမျက်နှာတွေကို pdf ပြောင်းတတ်ပြီထင်ပါတယ် ..
software ကိုလိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ . .. အဆင်ပြေတဲ့ link ကသာ Download လုပ်ပါ . လင့်အများကြီးပေးထားပါတယ် ..
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:47 AM